सन्दिपको कमाल जारी !! अाईपिएल पछि अब सिपिएल खेल्ने मौका
प्रकाशित मिति : February 24, 2018
काठमाडौं । क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएलको ड्राफ्टमा परेमा नेपाली खेलाडी पनि परेका छन्। शनिबार राति घोषणा गरिएको ड्राफ्टमा ३ सय ४८ खेलाडी छन्। जसमा २ सय २७ विदेशी तथा इन्डिजका १ सय २१ जना खेलाडी छन्। ड्राफ्ट सिपिएलका फ्रेन्चाइज टिमलाई दिइएको छ। अब यी खेलाडीको अक्सन मार्च १ मा हुनेछ। अक्सन लन्डनमा हुने सिपिएलले जनाएको छ।
नेपालका खेलाडी १८ देशका खेलाडी सिपिएलको ड्राफ्टमा छन् । अधिकांश टेस्ट राष्ट्रसहित क्यानडा, अमेरिका, ओमान, हङकङ, स्कटल्यान्ड, नेपाल, युएई र केन्याका खेलाडी पनि ड्राफ्टमा समेटिएका छन्।
ड्राफ्टमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भएको अनुमान गरिएको छ। अक्सनमा परेको विषयमा सन्दीपले केहि बोलेका छैनन्। यद्यपी ड्राफ्टमा नाम राख्नका लागि सन्दीपले पहल गरेको नेपाली टिम स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सन्दीप गत महिना इन्डियन प्रिमयर लिग आइपिएलको अक्सन सूचीमा परेका थिए। उनलाई अक्सनमार्फत दिल्ली डेयरडेभिल्सले २० लाख भारुमा आबद्ध गरेको थियो। त्यसअघि पाकिस्तान प्रिमियर लिग र ढाका प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा परेका सन्दीप अक्सनमा भने छनोट हुन असफल भएका थिए।
खुसिको खबर !! सन्दिप लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न सक्ने
पाकिस्तान बिरुद्ध भारतको एैतिहासिक हार, बर्ष २०१७ मा क्रिकेट जगतमा के के भयो ? जानीराखौं
किङ कोहली कसरी यति स्मार्ट ? यस्तो छ उनको फिटनेस सूत्र
विराट भर्सेस रोनाल्डोः फुटबलर रोनाल्डोको भन्दा भारतिय क्रिकेट कप्तान किङ कोहलीको कमाई धेरै ?
भारत , पाकिस्तान र श्रीलंकासँगै एसिया कप खेल्ने मौका, तर….